Denmark oo dib u bilowday dib u dajinta qoxootiga caalamiga ah. - NorSom News
Denmark oo dib u bilowday dib u dajinta qoxootiga caalamiga ah.
Xukuumada cusub ee dalka Denmark dhawaan ka dhalatay ayaa ku dhawaaqday inay dib usoo celin doonto soo qaadashada iyo dib u dajinta qoxootiga ku sugan xeryaha caalamka ee qaramada midoobay ay maamusho.
Xukuumadii hore ee dalka Denmark ka talineysay sideedii sano ee ugu danbeysay, ayaa gabi ahaanba joojisay soo qaadashada qoxootiga, sidoo kale diideyna inay aqbasho saamiga ay Denmark ku laheyd qeybsiga qoxootiga ee caalamiga ee midowga Yurub uu soo bandhigay.
Kala xiriir 45970350 ama booqo webkooda(Riix sawirka kore).
Xisbiyada bidixda ee isku baheystay xukuumadan cusub ayaa siyaasad ahaan dhanka qoxootiga ka yara fur-furan xukuumadii ka horeysay. Inkasta oo ay wali Denmark kamid tahay wadamada ugu siyaasad adag dhanka qoxootiga.
Xigasho/kilde: Danmark vil tage imod omkring 30 svage kvoteflygtninge i år-
Previous articleNordland: 30 shaqaale ka shaqeynayay barnevernka, ayaan heysan cadeynta booliska.
Next articleBergen: 7 qof oo ku eedeysan inay NAV ka khiyaaneen malaayiin kr